भन्सारले चाहेर मात्रै चोरी पैठारी नियन्त्रण सम्भव छैन - Karobar National Economic Daily
भन्सारले चाहेर मात्रै चोरी पैठारी नियन्त्रण सम्भव छैन
query_builderDecember 27, 2016 10:42 AM supervisor_account visibility610
जनार्दन आचार्य, प्रमुख, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय
नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सिमानामा रहेको भन्सार नाका पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रमुख व्यावसायिक नाका हो । यो नाकाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको आयात र करोडौं रुपैयाँको निर्यात हुने गर्छ । दैनिक २ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने यो नाकाबाट बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ भने निर्यात भने घट्दै गएको छ ।
केही समय पहिलेसम्म बर्सेनि १ लाख किलोको हाराहारीमा जडीबुटी निकासी हुने यो नाकाबाट भारतले विभिन्न वहाना बनाएर निकासीमा अवरोध गरेपछि अहिले ४० हजार किलो पनि निकासी हुन सकेको छैन । अन्य नाकासरह यो नाकामा पनि राजस्व संकलनमा विभिन्न चुनौती र समस्या बेला–बेलामा देखिने गरेका छन् ।
लामो समयदेखि सीमापारिबाट हुने अवैध आयात र अनधिकृत व्यापारले नेपालगन्ज बजार सुक्दै गएको गुनासो नेपाली व्यवसायीले गर्दै आएका छन् भने अर्कातिर भन्सारमा कडाइ नगरिएकै कारण सीमापारिको भारतीय बजार विस्तार हुँदै गएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
यी सबै अवस्था र परिस्थितिबीच नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर जनार्दन आचार्य हालै नेपालगन्ज आएका छन् । उनले खुला सिमानामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एक्लै भन्सारले मात्र चाहेर हुन नसक्ने भन्दै सबैको समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
हालको राजस्व संकलनको अवस्था, चोरी पैठारी नियन्त्रणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालगन्जस्थित कारोबार संवाददाताले भन्सार प्रमुख आचार्यसँग गरेको कुराकानी:
नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सार राजस्व संकलनको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
नेपालगन्ज नाकाबाट भन्सार राजस्व संकलनको अवस्था अहिलेसम्म निकै राम्रो छ । अहिलेसम्म हामीले तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी नै भन्सार राजस्व संकलन गर्दै आएका छौं । गत पाँच महिनाको अवधिमा हामीले लक्ष्यभन्दा १ सय २९ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौं ।
गत ५ महिनामा १ अर्ब ९६ करोड ६९ लाख ६५ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा हामीले २ अर्ब ५३ करोड ८२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेका छौं । गत वर्ष यसै बेलाको पाँच महिनामा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा यो १ सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
समग्रमा हेर्दा यो निकै सुखद र राम्रो संकेत हो । हालसम्म यो वर्ष नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक नै देखिएको छ । यसमा सबै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको मेहनत र सहयोग सामेल छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनाको कारण के हो ?
पहिलो कारण बर्सेनि व्यापार–व्यवसाय बढ्दै जानु हो, जसले गर्दा आयातमा वृद्धि हुँदै गएकाले राजस्व संकलन पनि बढ्दै गएको छ । अन्य कारणमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय सीमा नाकाबाट अलि टाढा रहेकाले राजस्व बढाउने उद्देश्यले भन्सारको यात्रु शाखालाई सीमा नाकाको छेउमै लगेर राखिएको छ ।
सो कारणले पनि राजस्व संकलन बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर भन्सार राजस्व संकलन प्रक्रियालाई सहज र सुलभ बनाउनुका साथै आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग बढी गरिएको छ । यसका साथै चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सक्रियता बढाइएको छ भने मूल नाकामा कडाइसमेत गरिएको छ । यी सबै कारणले भन्सार राजस्व बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
सीमापारिबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा राजस्व नतिरेर ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिने गरेको छ भनिन्छ नि ?
नेपालबाट औषधि उपचार, तीर्थयात्रा, घुुमघाम र रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीले फर्कने बेला व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही मात्रामा ल्याउने सामानलाई व्यावहारिक रूपमा खासै कडाइ गरिएको छैन । तर, सामान खरिद गर्नकै लागि व्यक्तिगत रूपमा भारतीय बजारमा जाने र व्यावसायिक प्रयोजनका लागिसमेत भारतबाट सामान ल्याउनेविरुद्ध हाल भन्सारमा कडाइ गरिएको छ ।
अहिले सबैसँग राजस्व असुली गर्न थालिएको छ । कसैलाई पनि अनधिकृत रूपमा सामान ल्याउने छुट छैन । हिजो के भयो त्यो मलाई थाहा छैन, तर अब कुनै पनि वहानामा राजस्व छलेर सामान भित्र्याउने छुट कसैले पाउँदैन । पटक–पटक सीमापारि गएर साइकलमा सामान बोकेर दिनभरि दौड लगाउनेहरूविरुद्ध निगरानी कडा गरिएको छ ।
सीमापारिबाट दिनदिनै सामान ल्याउनेहरूसँग भन्सार कर्मचारीले नै पैसा लिएर छोड्ने गरिएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । तपार्इंको पालामा नियन्त्रण हुन्छ त ?
यस्तो कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । मलाई लाग्दैन कि हाम्रा कुनै कर्मचारीले त्यसो गरेका छन् भन्ने, तर पनि यदि त्यस्तो केही छ भने मेरो पालामा त्यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुनेछ ।
भन्सारकै कर्मचारीबाट राजस्व चुहावट गर्न प्रेरित गर्ने काम कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । त्यसका लागि मेरो निगरानी निरन्तर रहनेछ । हाम्रा कुनै पनि कर्मचारीले त्यस्तो काम गर्ने छैनन् भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
भन्सारमा यति धेरै जनशक्ति, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीसमेत हुँदाहुँदै पनि चोरी पैठारी गरेर नेपालगन्जमा पु¥याइएका लाखौं लाखका सामान बरामद गर्ने गरिएको छ नि, किन ?
यसको सबैभन्दा ठूलो कारण खुला सिमाना हो । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान मुख्य नाकामा राख्ने गरेका छौं । यो नाकाबाट गएर सामान नेपालगन्जमा पक्राउ परेका होइनन्, बरु अन्य साइडका नाकाबाट चोरी पैठारी गरेर सामान नेपालगन्ज पुगेको हुन सक्छ । चारैतिर नाका खुला रहेकाले सबै ठाउँमा एकैपटक गस्ती गर्न सम्भव छैन र त्यो गर्न पनि सकिँदैन ।
मूल नाकाबाट चोरी पैठारी भएको छैन । अन्य साइड नाकाबाट चोरी पैठारी गरेर सामान भित्रिने गरेकाले हामीले त्यता पनि कडाइ गर्ने योजना र सोच बनाउँदै छौं । बिस्तारै सबैतिर कडाइ गर्दै चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नतिर हामी प्रतिबद्ध छौं । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि के–कस्ता प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेका छन् । भन्सार कार्यालयमा रहेका ६१ जना भन्सार कर्मचारी, ७५ जना सशस्त्र प्रहरी र २९ जना नेपाल प्रहरीले नियमित गस्ती गर्ने गरेका छन् । यसका साथै सीमा सुरक्षा बल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पनि चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गस्ती गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
मूल नाकामा चोरी पैठारी हुन नदिन निकै कडाइ गरिएको छ । राजस्व नतिरेर यदि कोही जान खोज्छ भने उसले ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्छ र हामीले तिराएका पनि छौं । केही दिनपहिले एउटा आलुको ट्रकले कम राजस्व तिरेर गएकोमा ठूलो जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
उसले इमानदारीपूर्वक भन्सार तिरेको भए १९ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेमा ७ लाख ३० हजार जरिवाना तिर्नुपरेको छ । आलुको बोराभित्र चिनी र कपडा लुकाएर ल्याउनेलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । तर, एक्लै भन्सारले मात्र चाहेर चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन ।
यसमा नागरिक समाज, व्यापारी, राजनीतिक दलका अगुवा, सामाजिक कार्यकर्ता र पत्रकार सबैको समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सबै एकजुट भएर लाग्नु आवश्यक छ ।
यो नाकाबाट निकासी र पैठारीको अवस्था के छ र निकासी–पैठारी हुने प्रमुख वस्तु के–के हुन् ?
नेपालगन्ज नाकाबाट पैठारी धेरै राम्रो छ तर निकासी भने न्यून नै छ । केही समय पहिलेसम्म जडीबुटी धेरै निकासी हुने नाकामध्ये यो प्रमुख थियो । तर, हाल आएर जडीबुटी निकासी शून्यमा पुगेको छ । यो नाकाबाट पैठारी हुने वस्तुमा मुख्य पेट्रोलियम पदार्थ हो ।
यो नाकाबाट पैठारी हुने सामानमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी ७० प्रतिशतजति छ । सोबाहेक घरायशी सामान, लत्ताकपडा, चामल, मकै, तोरी, गहुँलगायतका खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चापदार्थ, साइकल र कृषि प्रयोजनका सामग्री ट्र्याक्टरलगायत रहेका छन् ।
केही समयपहिलेसम्म यो नाकाबाट विभिन्न प्रकारका जडीबुटी सबैभन्दा बढी निकासी हुने गर्थे । तर, भारतले विभिन्न जटिलता उत्पन्न गराएपछि जडीबुटी निकासी निकै घटेको छ । १ लाख किलोको हाराहारीमा बर्सेनि जडीबुटी निकासी हुने यो नाकाबाट हाल आएर ४० हजार किलो पुग्न पनि धौधौ हुने गरेको छ ।
अहिले आएर निकासी हुने सामानमा मुख्यतया मासु नै बढी रहेको छ । मासु भियतनाममा निकासी गरिने गरिएको छ । योबाहेक नेपालगन्ज नाकाबाट रिट्ठा, घिउलगायतका सामान पनि बढी निकासी हुने गरेको छ ।
कार्यालयको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? कर्मचारी दरबन्दी र विज्ञता पर्याप्त छ ?
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको पूर्वाधारको अवस्था राम्रो छैन । २०/२५ वर्षभन्दा पहिले बनेका पुराना भवनमा बसेर काम गर्नुपरिरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता बढेकाले कार्यालयका लागि प्रर्याप्त ठाउँ नै छैन । निकै कम ठाउँमा वर्षौंदेखि काम भइरहेको छ । भवन नभएकाले यात्रुशाखालाई भाडामा घर लिएर चलाइरहेका छौं ।
यसैगरी यो भन्सार कार्यालयमा ६१ जना कर्मचारी छन् भने ७५ जना सशस्त्र प्रहरी र २९ जना नेपाल प्रहरी खटिएका छन्, जुन अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छन् । भन्सार राजस्वलाई राम्ररी संकलन गर्नुका साथै अहिलेको वर्तमान प्रविधिसँगै अगाडि बढ्नका लागि कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
हामीकहाँ दक्ष कर्मचारी पनि छन् तर उनीहरूको दक्षता र विज्ञता अझ बढाउनका लागि थप प्रयास गरिरहेका छौं । यसका साथसाथै भन्सार कार्यालयमा आधुनिक प्रविधिको जडान र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
नेपालगन्ज नेपाल–भारत सिमाना भन्सार नाका आयात निर्यात